नपढ्ने व्यक्तिको लागि लेखन | Martech Zone
नपढ्ने व्यक्तिको लागि लेखन
सोमबार, मार्च 28, 2011 बुधबार, अक्टोबर 29, 2014 Douglas Karr
यस हप्ता, मैले एक फेसबुक टिप्पणीमा जवाफ दिए (ठीक छ ... यो एक तर्क थियो) र लेखकले तुरून्त जवाफ दिए ... "त्यसैले हामी सहमत छौं!"। यसले मलाई पछाडि जानु भयो र फेरि उनको टिप्पणीहरू पढ्ने बनायो। मेरो टिप्पणी उनको भित्री प्रतिक्रियामा कत्ति डरलाग्दो थियो भनेर हेर्न म लाजमा परें - मैले उसका मुख्य बुँदाहरूलाई पूर्ण रूपमा छुटाइन।
पछि, मैले मेरो ब्ल्गमा एक टिप्पणी फेला पारे जसले मलाई ब्लास्ट गर्‍यो… तर वास्तवमै मैले लेखेको मेरो राय भन्दा फरक थिएन। यो वास्तव मा वेब मा एक प्रमुख मुद्दा औंल्याउँछ - व्यक्तिहरू पढिरहेका छैनन् अरु केहि। यो आलस्यको कुरा हैन र यो मूर्खता पनि होइन ... म साँच्चिकै विश्वास गर्दछु यो समय हो। मान्छे तपाइँको पृष्ठ, झलक, र एक निष्कर्षमा पुग्छ।
के यसले वास्तवमै औंल्याउँछ तपाइँको अनलाइन सन्देशको लागि डिजाईन गर्नको लागि आवश्यकता हो अधिकतम समझ। तपाईको साइटलाई भिजुअलहरू चाहिन्छ - कि त छवि वा भिडियो - ताकि पाठकहरूले छविमा एकसाथ सामग्रि सामग्रीमा हेराई गर्न सक्नेछन्, र तपाईंले सन्देश मार्फत व्यक्त गर्न खोज्नु भएको जानकारीलाई पूर्ण रूपमा कायम राख्न सक्दछन्। यो अब 500०० शब्द पोस्ट लेख्न पर्याप्त छैन।
म ग्राहकहरूलाई उनीहरूको पृष्ठमा २ दोस्रो नियम गर्न सल्लाह दिन्छु। कसैसँग हुनुहुन्छ जुन तपाईंको साइटमा पहिले कहिल्यै नहुनको लागि थियो र उनीहरूलाई २ पूर्ण सेकेन्डको लागि साइट फ्ल्यास गर्नुहोस्।
तिनीहरूले के देखे?
केन्द्रीय सन्देश थियो?
के तिनीहरूले कुनै जानकारी राखेका थिए?
के उनीहरूलाई थाहा छ कि अब के गर्ने?
यो त्यस्तो होइन कि सबैले समय लिदैन - तर धेरैले गर्दैनन्। र ती धेरै पाठकहरू तपाइँको उत्पादन वा सेवाहरूको लागि उत्तम उम्मेदवार हुन सक्छ।
टैग: टिप्पणीस्टोरमाइन-स्टोर मार्केटिंगओगवे
वुफुमा लुकेको फिल्ड पपुलेट गर्नुहोस्